Wasaaradda gaadiidka oo xeer cusub kasoo saartay ka ganacsiga gaadiidka (DHAGEYSO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Wasaaradda gaadiidka oo xeer cusub kasoo saartay ka ganacsiga gaadiidka (DHAGEYSO)
Wasiirka gaadiidka iyo duulliska hawada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Salaad Oomaar oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay sharci ay wasaaradiisu kasoo saartay sumadda gaadiidka.
Wasiirka ayaa sheegay in wasaarada gaadiidka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka duulaysa amniga dalka inay xeer cusub kasoo saartay gaadiidka nuucyadiisa kala duwan.
Wuxuu wasiirka tilmaamay in xeerkaan cusub ay kasoo qaateen xeerarkii hore, kuna dareen qaar cusub iyagoo ganacsatada gaadiidka ay la tashi la sameeyay, waxyaabaha ay ka cabanayaan ay ka mid ahaayeen in baabuurta ay dibadda ka keenaan marka ay in muddo ah garaash ku jiraan xilliga laga iibsanayo ay la mid noqdaan gaari marhore dalka la keenay.
Dhinaca kale, wasaaradda gaadiidka iyo duullista hawada ayaa sameeysay taargooyin ganacsi oo gawaarida la siinayo inta laga iibsanayo, marka qof shaqsi ah ama shirkad iibsatana, waxaa la siinayaa taargooyin cusub oo rasmi ah.
Wasiir Oomaar ayaa sheegaya in xeerkaan cusub uu ka mid yahay qodob caddeynaya in qofka shaqsiga ah marka uu gaariga iska iibinayo ay waajib ku tahay inuu taargada dib u soo celiyo, si looga hortago in gaariga loo adeegsado xaalad amni darro ah.
Si kastaba ha ahaatee, wasaaradda gaadiidka iyo duullista hawada ee xukumadda federaalka Soomaaliya ayaa haatan u muuqata mid dadaal xoogan ugu jirta dhaqan-gelinta adkeynta sharciyada gaadiidka lagu isticmaalo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.